YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, September 06
6 Sep2011 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/06/20110အကြံပြုခြင်း
ပဒိုမန်း​ငြိမ်း​မောင်ကို မြန်မာအာဏာပိုင် စစ်​ကြော​နေဟုဆို
September 6, 2011 by နော်နိုရင်း
ကရင်အမျိုး​သား​အစည်း​အရုံး​ (​ကေအန်ယူ) ​ခေါင်း​ဆောင်တဦး​ဖြစ်တဲ့​ ပဒိုမန်း​ငြိမ်း​ ​မောင်ကို မြန်မာအာဏာပိုင်​တွေက ဖမ်း​ဆီး​ထား​ပြီး​ ရန်ကုန် ​ရေကြည်အိုင် စစ်​ကြော ​ရေး​စခန်း​မှာ စစ်​ဆေး​နေတယ်လို့​ သတင်း​ရ​ကြောင်း​ သူ့​ဆွေမျိုး​တဦး​က ​ပြောပါတယ်။
မန်း​ငြိမ်း​ ​မောင်ဟာ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ ဇူလိုင်မှာ တရုတ်နိုင်ငံကို နှစ်ပတ်ကြာသွား​ပြီး​ ကူမင်း​ ​လေ​ကြောင်း​နဲ့​ ထိုင်း​နိုင်ငံကိုအပြန်မှာ ဗီဇာမရှိတာ​ကြောင့်​ နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန် ပို့​ဆောင်ခဲ့​ပြီး​ ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်း​မှာ သူ့​ကို တရုတ်အာဏာပိုင်​တွေက မြန်မာနိုင်ငံကို ပို့​လိုက်တာလို့​ သူ့​ဆွေမျိုး​က ​ပြောပါတယ်။
မန်း​ငြိမ်း​မောင်ကို မြန်မာလူဝင်မှုကြီး​ကြပ်​ရေး​ရုံး​ကတဆင့်​ ​အောင်သ​ပြေ စစ်​ကြော​ရေး​၊​ မင်္ဂလာဒုံမြို့​နယ်ရဲစခန်း​၊​ စသည်ဖြင့်​ အဆင့်​ဆင့်​ပို့​ပြီး​နောက် ​နောက်ဆုံး​မှာ ​ရေကြည်အိုင် စစ်​ကြော​ရေး​ကို ​ရောက်သွား​တယ်လို့​ သိရ​ကြောင်း​ မန်း​ငြိမ်း​မောင်ရဲ့​ဆွေမျိုး​က ​ပြောပါတယ်။
ရေကြည်အိုင်မှာ စစ်​ကြောမှုကြမ်း​တမ်း​တဲ့​အတွက် အသက် ၆၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့​ မန်း​ငြိမ်း​မောင်အတွက် စိုး​ရိမ်စရာဖြစ်​နေတယ်လို့​လည်း​ ​ပြောပါတယ်။
“သူ့​ကျ​တော့​ နိုင်ငံ​ရေး​နဲ့​နွှယ်တယ်ဆို​တော့​ အဲဒီမှာ ​ပေါ်သွား​မယ်ထင်တယ်။ အဲဒါ ​ကြောင့်​ အဆင့်​ဆင့်​ သူ့​ကိုပို့​တာက ပိုကြမ်း​တဲ့​ ​နေရာကိုပို့​ပြီး​တော့​ သတင်း​ပိုရဖို့​ လုပ်​နေ သလိုမျိုး​ ဖြစ်​နေမလား​။ ​ရေကြည်အိုင်က စစ်​ဆေး​မေး​မြန်း​လို့​ရှိရင် ပုံစံ​တော်​တော်ကို ရက်ရက်စက်စက် စစ်​ဆေး​မေး​မြန်း​တဲ့​နေရာ။ အဲဒါလည်း​ ကျ​နော်တို့​အတွက် အ​တော်ကို အစိုး​ရိမ်ဆုံး​ဖြစ်တယ်။ သူ့​မှာ အသက်လည်း​ကြီး​တဲ့​အပြင် ​ရောဂါလည်း​ရှိတယ်။ ကျန်း​မာ​ရေး​လည်း​ ​ကောင်း​တာမဟုတ်ဘူး​။ သူကဘယ်လိုနည်း​နဲ့​မှ အကြမ်း​ခံပြီး​တော့​ ​မေး​မယ့်​မေး​ခွန်း​တွေကို ရိုက်နှက်စစ်​ဆေး​တာ​တွေ ပုံစံအမျိုး​မျိုး​နဲ့​ အပြစ်​ပေး​ပြီး​တော့​ သတင်း​ထွက်လာ​အောင် ယူတာမျိုး​တော့​ ဘယ်လိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး​။ ဒီလူက ဒါမျိုး​ ဆို ​သေမှာပဲ။”
ကေအန်ယူ အမြဲတမ်း​ဗဟို​ကော်မတီဝင် မန်း​ငြိမ်း​မောင်ဟာ ညီညွတ်​သော တိုင်း​ရင်း​သား​လူမျိုး​များ​ ဖက်ဒရယ်​ကောင်စီ အမှု​ဆောင်နဲ့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီ တပ်​ပေါင်း​စု တွဲဖက်အတွင်း​ရေး​မှူး​လည်း​ ဖြစ်ပါတယ်။
မန်း​ငြိမ်း​မောင်ဟာ မဆလ (မြန်မာ့​ဆိုရှယ်လစ်လမ်း​စဉ်ပါတီ) ​ခေတ် ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံ​ရေး​လှုပ်ရှား​မှု​ကြောင့်​ တသက်တကျွန်း​ ​ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီး​ ကိုကိုး​ကျွန်း​မှာ အကျဉ်း​ကျဖူး​ပါတယ်။ အကျဉ်း​ကျ​ဖော်နှစ်ဦး​နဲ့​အတူ လက်ဖြစ်​လှေနဲ့​ ပင်လယ်ဖြတ်ပြီး​ ကိုကိုး​ကျွန်း​နဲ့​ မိုင် ၂၅၀ အကွာ မွန်ပြည်နယ်ကမ်း​ခြေကို လွတ်​မြောက်သွား​ပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ အစိုး​ရစစ်တပ်က ဖမ်း​ဆီး​လို့​ အင်း​စိန်​ထောင်မှာ ၃ နှစ်အကျဉ်း​ကျ တိုက်ပိတ်ခံခဲ့​ရပြီး​ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ လွတ်​မြောက်ခဲ့​ပါတယ်။
မန်း​ငြိမ်း​မောင်ဟာ မဆလ​ခေတ်မှာ အဖမ်း​ခံရတုန်း​က ​ရေကြည်အိုင် စစ်​ကြော​ရေး​စခန်း​မှာ နှိပ်စက်စစ်​ဆေး​ခံခဲ့​ရတဲ့​အ​ကြောင်း​ကို သူကိုယ်တိုင် ‘မုန်တိုင်း​ကို ဆန်၍ ပင်လယ်ကိုဖြတ်​သောအခါ’ ဆိုတဲ့​ စာအုပ်မှာ ထည့်​သွင်း​ရေသား​ထား​ပါတယ်။
“ကျိုးနွံတယ်ဆိုတဲ့ အောက်တန်းကျစိတ်ကို ဖယ်ရှားပစ်ကြ”
(ဆရာတော်ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ပျံလွန်တော်မူခြင်း (၇၂) နှစ် အထိမ်းအမှတ်ဆောင်းပါး)
ဆန်ရေစပါးနှင့် သယံဇာတမျိုးစုံပေါကြွယ်လှသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းသူပြည်သားတို့ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲကျပ်တည်းကာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်နေကြရခြင်းသည် “အစိုးရ ညံ့ဖျင်းလွန်း၍ ဖြစ်သည်” ဟု ၁၉၂၁ ခုနှစ် မတ်လ (၂၃) ရက်နေ့ ဒေးဒရဲမြို့နယ် ဆုကလပ်ရွာ၌ တရားဟောခဲ့သဖြင့် ဗြိတိသျှစစ်ပုလိပ်တို့၏ ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို မြန်မာတို့ မမေ့လောက်သေးဟု ထင်သည်။ ထို ပုဂ္ဂိုလ်မှာ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ မဟုတ်၊ သာသနာ့နယ်ပယ်မှ ထူးခြားသော ရဟန်းတော်တပါး ဖြစ်သည်။
ထို ပုဂ္ဂိုလ်သည် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံး ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသော ရဟန်းအာဇာနည်ဖြစ်သည်။ အထူး သဖြင့် “ကရက်ဒေါက် ဂက်ဒေါက်” (Craddock, Get Out!) ဟူသော ကြွေးကြော်သံကို အကြောင်းပြု၍ ဆရာတော်ကို မှတ်မိကြမည် ထင်ပါသည်။ ထိုအာဇာနည်အရှင်ကား “ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ” ဖြစ်သည်။ “ကရက်ဒေါက်” (Sir Reginlad Henry Craddock) သည် ထိုစဉ်က ဗြိတိသျှကိုလိုနီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယဘုရင်ခံ ဖြစ်သည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ ဟောပြောချက်တခု၌ “ဒီတိုင်းပြည်သူ တပါးလက်အောက်ခံ ကျွန်နိုင်ငံ ဖြစ်နေရင် ဒီတိုင်းပြည်က လူမျိုးဟာလည်း ကျွန်လူမျိုး၊ ဒီလူမျိုးကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာဟာလည်း ကျွန်ဘာသာ ကျွန်သာသနာ ဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ဘာသာ ကျွန်သာသနာအဖြစ်က လွတ်အောင် သံဃာတော်များ ကျောင်းတွင် ကျိန်းအိပ်မနေကြဘဲ သံဃသမဂ္ဂီ အဖွဲ့များ ဖွဲ့ပြီး ဒီတိုင်းပြည် ဒီလူမျိုး လွတ်လပ်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ကြတယ်” စသည်ဖြင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဟောပြော ခဲ့ပုံမှာ ကြက်သီးထလောက်သည်ဟု မှတ်တမ်းများရှိသည်။
ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးလွတ်လပ်ရေးအတွက် ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးခံကာ ဆရာတော်သည် ကိုလိုနီနယ် ချဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရ အား နှလုံးရည်တိုက်ပွဲဆင်ခဲ့သည်။ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအမျိုးမျိုးအကြားမှ မိမိနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ နိုင်ငံ ရေးအသိအမြင် ကျယ်ပြန့်တိုးတက် လာစေရန် ထောင်တန်းအကျခံကာ ဟောပြောခဲ့သည့် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် မြန်မာတို့အား အစောဆုံး နိုင်ငံရေးမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သူတို့အနက် ရှေ့ဆုံးတန်းမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ‘ဆရာ တော် ဦးဥတ္တမ’ သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး စတင်သည့် ၁၉၃၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့ သက်တော် (၆၀) ပြည့်ချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သဖြင့် ယခု ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာတွင် (၇၂) နှစ် ပြည့်ခဲ့ပေပြီ။ သို့သော် ဆရာတော်၏ သြ၀ါ ဒများကာ ရှင်သန်နေဆဲ ရှိပေသည်။
ဆရာတော်၏ ငယ်နာမည်မှာ “ပေါ်ထွန်းအောင်” ဖြစ်သည်။ အဘ ဦးမြနှင့် အမိ ဒေါ်အောင်ကျော်သူ တို့မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့တွင် (၁၈၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၈)တွင် ဖွားမြင်သည်။ အသက်(၁၅)နှစ်တွင် ကာလကတ္တားမှ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ဆယ်တန်းအောင်သည်။ ထို့နောက် ပခုက္ကူမြို့ ရေစကြို စာသင်တိုက်၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေကျမ်းဂန်များသင်ယူသည်။ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရဟန်းဝတ်ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ကြွရောက်၍ ကာလကတ္တားရှိ အိန္ဒိယအမျိုးသား ကောလိပ်၌ ပါဠိ၊ သက္ကဋ၊ ဘင်္ဂါလီ၊ မာဂရီ၊ ရှေးဟောင်း ဟိန္ဒူစာပေများ သင်ယူခဲ့သည်။ ထိုကျောင်း၌ပင် ပါဠိပါမောက္ခအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ဖူးသည်။
၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တဆင့် ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျာမနီတို့သို့ခရီးလှည့်၍ နိုင်ငံတကာ အရေးအရာများကို လေ့ လာဆည်းပူးခဲ့ သည်။ ဥရောပ၌ ရှိနေစဉ် ၁၉၀၅ ခုနှစ် ရုရှ-ဂျပန်စစ်ဖြစ်ရာ ဂျပန်က အနိုင်ရသည့်သတင်းကို ကြားသိရ၍ အလျှင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းကို လေ့လာလိုစိတ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် ဆရာတော်သည် ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင် ဂျပန် နိုင်ငံသို့ သွားရောက် ကာ တိုကျို ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် ပါဠိနှင့် သက္ကဋဘာသာဆိုင်ရာ ပါမောက္ခအဖြစ် (၄) နှစ်နီးပါး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အပြန်ခရီးတွင် ကိုရီးယား၊ မန်ချူးရီးယား၊ တရုတ်၊ ကမ္ဘော ဒီးယားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများသို့ ၀င်ရောက်လေ့လာခဲ့သည်။
၁၉၁၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်သောအခါ သူရိယသတင်းစာတွင် နိုင်ငံတကာ တိုးတက်မှု အခြေအနေအထွေထွေကို နိုင်ငံသားများ ပညာဗဟုသုတရစေရန် ရေးသားတင်ပြခဲ့သည်။ “၀ိုင်အမ်ဘီအေ” ကို စတင်ထူထောင်ခဲ့ကြသော ဦးဘ ဘေ၊ ဦးမောင်ကြီး၊ ဦးဘရင်တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သူရိယသတင်းစာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည့် ဦးဘကလေး၊ ဦးလှ ဖေ အစရှိသော ထိုခေတ် လူငယ် လူလတ်များနှင့် လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ် လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်သင့်ကြကြောင်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ခဲ့သည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ နိုင်ငံရေးအမြင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးသို့ ဦးတည်သည်။ လွတ်လပ်ရေး မရနိုင်သေးမီစပ်ကြား ‘ဟုမ္မရူး’ ခေါ် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ့်အမျိုးသားတို့ ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ် ကြဖို့ ရေးသား ဟောပြောသည်။ ပညာတတ်လူငယ်လူလတ်များကို ဟုမ္မရူးသဘောတရားစိတ်ဓာတ် များကို နားဝင်အောင် ဆွေးနွေးပြော ဆိုသည်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရှိစဉ်က အိန္ဒိယ-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံလွတ်လပ် ရေး ရရှိရန်ကိစ္စများကို ကွန်ဂရက်ပါတီ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည်။ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း မြန် မာဒေသခွဲ ကွန်ဂရက်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဒုတိယအကြိမ် သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဂျပန်တွင် ဆရာတော်သည် ပါဠိနှင့် သက္ကဋ ဘာသာ ပါမောက္ခအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် မြန်မာနိုင်ငံရေးရာ ကိစ္စများကို ဂျပန်ရောက် တရုတ်ကျောင်းသား များနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့လည်း သွားရောက်ခဲ့၍ တရုတ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ဆွန်ယက်ဆင် နှင့်လည်း တွေ့ဆုံသိကျွမ်းခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ ဆွန်ယက်ဆင်နှင့် အာရှဒေသ လွတ်လပ်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးကာနီးတွင် ဆရာတော် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ကြွလာသည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်၍ မြန်မာလူထု နားမျက်စိပွင့်စေရန် နိုင်ငံတကာမှ ရရှိခဲ့ သော အသိပညာ ဗဟုသုတများနှင့် ယှဉ်တွဲ၍နိုင်ငံရေး တရားများဟောပြောခဲ့သည်။ ဆရာတော်၏ ဟောပြောချက်များ မှာ စကားလုံးပြောင်ပြောင် ထိထိ မိမိရှိလှ သဖြင့် တရားပွဲတိုင်း ကျိတ်ကျိတ်တိုး စည်ကားသည်ဟု မှတ်တမ်းများရှိသည်။ ဆရာတော်၏ ဟောပြောချက်တရပ်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။
“မြန်မာတိုင်းသူပြည်သားတို့ဟာ ကျိုးနွံတယ်ဆိုတဲ့ အောက်တန်းကျစိတ်များကို ဖယ်ရှားပစ်ကြရမယ်။ မြန်မာတိုင်းသူ ပြည်သားတို့ဟာ စွမ်းရည်သတ္တိရှိကြောင်း၊ ပညာရှိကြောင်းနဲ့ မဟုတ်မခံ စိတ်ဓာတ်ကို ပြရမယ်။ ဒီလိုပြနိုင်ရင် ကျုပ်တို့ကို ဘယ်သူကမှ စော်ကားရဲ ဖိနှိပ်ရဲမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘယ်လို အင်အားကြီးပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အစိုးရဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားအပေါင်း စည်းလုံးညီညာစွာနဲ့ တွန်းလှန်နိုင်ကြရင် တာရှည်ခံနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် အောင်စေချင်ရင် နောက်မတွန့်ကြနဲ့။ ကြောက်အားမပိုကြနဲ့၊ ဒုက္ခကို ပဓာနမထားကြနဲ့၊ ဟုမ္မရူးတို့ လွတ်လပ်ရေးတို့ဆို တာ ကျုပ်တို့ ရထိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ကြီးများဖြစ်တယ်။ ဗျူရိုကရေစီ ၀ါဒ သမားတွေက ဘယ်လောက်ပဲ နှောင့်ယှက် နှောင့်ယှက် တကယ်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ သဘောမှန်ဟာ တိုင်းသူပြည်သားတို့ လက်ထဲမှာသာ ရှိတယ်။˝
ထို့ကြောင့်လည်း ဆရာတော် ဦးဥတ္တမအား ရှေးဟောင်းအတွေးအခေါ်အယူအဆတို့ကို ပယ်လှန်သူ၊၀ံသာနုစိတ်ဓာတ် တက်ကြွအောင်လှုံ့ဆော်သူအဖြစ် ထိုခေတ်လူထုကလက်ခံထားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ၀ံသာနု အမျိုးသားရေးလှုပ် ရှားမှု စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည့် ‘ဂျီစီဘီအေအသင်းကြီး’ ၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ အောင်မြင်စေရန်အတွက်လည်း ဆရာတော်က များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။
“ကရက်ဒေါက် ဂက်ဒေါက်” (Craddock, Get Out!) ဟူသော ကြွေးကြော်သံကို အကြောင်းပြု၍ ဆရာတော်နာမည် သ တင်း ပိုမိုပေါ်လွင် ထင်ရှားလာသည်။ ဆရာတော်၏ ဟောပြောမှုများကြောင့် အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုလည်း ပိုမိုအရှိန်ရ လာသည်။ လူထုအများ နိုင်ငံရေး နိုးကြားလာလျှက် ၀ံသာနုအသင်းများလည်း တိုးတက်များပြားလာသည်။
သူရိယသတင်းစာကလည်း ဆရာတော်၏ ဟောပြောမိန့်ကြားချက်များကို ထောက်ခံရေးသားခဲ့သည်။ ဆရာတော်၏ အ တွေးအမြင်သစ် ဆောင်းပါးများကိုလည်း သူရိယသတင်းစာက တခန်းတနား ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူရိယသတင်းစာတိုက်ကို ဆရာတော်၏ ဌာနချုပ်ဟုပင် ထိုခေတ်က သတ်မှတ်ကြသည်။
ဗုဒ္ဓသာသနာ စည်ပင်တိုးတက်စေရန် ဦးစွာပထမ ကျွန်ဘ၀က လွတ်အောင်လုပ်ရမည်ဟု ဆရာ တော်က ဟောပြော သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုး ဘာသာ သာသနာအကျိုးအတွက် ‘သံဃသမဂ္ဂီများ’ ထူထောင်ဖွဲ့စည်း၍ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဟု ဦးဥတ္တမကမိန့်ကြားသဖြင့် နိုင်ငံအနှံ့တွင် သံဃသမဂ္ဂီများပေါ်ထွန်းလာကာ၊ နိုင်ငံရေးတရား ဟောပြောသည့် သံဃာတော်များ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
ဤသို့ ဆရာတော်၏ ၀ါယမစိုက်ထုတ်မှုကြောင့် ၁၉၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁) ရက် (၂) ရက်တွင် သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့ပေါင်း (၃၀) ကျော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များအစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ဆရာတော် သံဃာတော်များ ဂျီစီဘီအေ အသင်း ခေါင်းဆောင်များ အပါအ၀င် ရဟန်းရှင်လူ ပရိသတ်ငါးရာကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒေးဒရဲမြို့နယ် ဆုကလပ် ရွာတရားပွဲအပြီး ဆရာတော် ဦးဥတ္တမအား နိုင်ငံရေးလုပ်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးလိုက်သောအခါ ရဟန်းရှင်လူ ပြည် သူအများ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကြရသည်။ ဆရာတော်ကို အကြောင်းပြု၍ ‘ဂျီစီဘီအေ’ အသင်းကြီးကို လူထုကပိုမိုထောက်ခံ အားပေးလာခဲ့သည်။
ဆရာတော်သည် ပထမအကြိမ်ထောင်ကျရာမှ ပြန်လွတ်လာပြီးနောက် တပြည်လုံးလှည့်လည်၍ နိုင်ငံရေးတရားများ ဟောကြား ခဲ့ပြန်သည်။ “အင်္ဂလိပ်ပစ္စည်းကို သပိတ်မှောက်ကြ” “အင်္ဂလိပ် ဆိုင်တွေကို သပိတ်မှောက်ကြ” “တိုင်းရင်း ဖြစ် ပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူ အားပေးကြ” “တိုင်းရင်းသားဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်ယူအားပေးကြ” “ဒို့လူမျိုးတွေ ညီညွတ်မှ လွတ်လပ် ချမ်းသာမယ်” “ဟုမ္မရူး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရအောင် တောင်းဆိုကြိုးပမ်းကြ” “ကရက်ဒေါက် ဂက်ဒေါက်” (Craddock, Get Out!) စသော ကြွေးကြော်သံများးကြောင့် ၁၉၂၄ ခုနှစ် ရန်ကုန် ကျုံးကြီးလမ်း နန်းတော် ရုပ်ရှင်ရုံတရားပွဲအပြီး ဒုတိ ယအကြိမ် အဖမ်းခံရပြန်သည်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရကို အကြည်ညို ပျက်စေအောင် ဟောပြောကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားသည်ဆို ကာ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ် အပြစ်ပေးခံရသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို ပြန်လှန်လေ့လာသည့် အခါတိုင်း ၀ိုင်အမ်ဘီအေခေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏ ယုဝအသင်း၊ နောင် ဂျီစီဘီအေခေါ် မြန်မာအသင်းချုပ်ကြီး၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ချန်လှပ် ထား၍ မရနိုင်ပေ။ ထိုမြန်မာအသင်းချုပ်ကြီး တိုးတက်ကျယ်ပြန့်လာအောင် အထောက်အကူ ပြုပေးခဲ့ရာတွင်လည်း သံဃာတော်များနှင့် သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့များ၏ ထောက်ခံ အားပေးမှုများမှာ အဓိကနေရာမှပါဝင်ပေသည်။
ထိုသို့သံဃာတော်များ တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဆောင်ရာ၌ ရှေ့တန်းမှ တက်တက်ကြွကြွပါလာအောင် အဦးဆုံး ဟောပြောခဲ့ သော ဆရာတော်ကား ဦးဥတ္တမပင် ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ စာပေကျမ်းဂန်များကိုသာ သင်အံလေ့လာလျှက် တရားဘာဝနာ ပွားများနေကြ ကုန်သော သံဃာတော်တို့အနေဖြင့် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီး ပွားရေး၊ လူမှုရေး ဟောပြောချက်များကို လက်ဦးတွင် နားမ၀င်နိုင်ခဲ့ကြပေ။ နောင်နှစ်အတန်ငယ်ကြာသောအခါ ဆရာ တော် ဦးဥတ္တမ၏ နိုင်ငံရေးတရားများမှာ စကားဝေါဟာရအရ မာကြောသော်လည်း လက်တွေ့ အနှစ်သာရအရ အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် အမှန်ပင်အကျိုးပြုကြာင်း သိမြင်လာကြ၍ ၀န်းရံထောက်ခံလာကြသည်။
ထိုစဉ်က ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနှင့် သူရိယသတင်းစာတို့သည် ၀ိုင်အမ်ဘီအေအသင်းကို ပြည်သူ တရပ်လုံး ထောက်ခံ အားပေးလာ အောင် စိုက်လိုက်မတ်တတ်လှုံ့ဆော်ရေးသာခဲ့သဖြင့် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များ တက်ကြွလာခဲ့သည်။ ဦးဥတ္တမ၏ ရိုးသားမှု၊ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့မှု၊ တိုင်းပြည်နှင့် လူထုအကျိုးကိုသာ ရှေးရှုမှုတို့ကြောင့် ဆရာတော်ကို စံထားကာ သံဃာအများ မြန်မာအသင်းချုပ်ကြီး၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်လာကြသည်။ အစည်းအဝေးများ၊ ကွန်ဖရင့်များတွင် သံ ဃာတော်များ ပါဝင်ဆွေးနွေးဟောပြောလာ ကြသည်။ သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကာ နိုင်ငံ့အရေးအရာများ၌ ပါဝင် ဆောင်ရွက်လာကြသည်။
အထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒုတိယဘုရင်ခံ ကရက်ဒေါက်၏ ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ် ရေးစနစ် ကို ဆန့်ကျင်ကာ ၀ိုင်အမ်ဘီအေကို ထောက်ခံလျှက် ဟုမ္မရူး တောင်းဆိုဟောပြောခဲ့သည်။ ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ် ရေးစနစ်တွင် အမတ် (၁၀၃) နေရာ ရာထား သော်လည်း (၇၉) ဦးသာ ရွေးကောက်ခံဖြစ်သည်။ ကျန်သူတို့မှာ ဘုရင်ခံ ခန့် ဗျူရိုကရက်များဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဗျူရိုကရက်တို့ တွဲဖက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေပြု ကောင်စီတွင် အဆိုတခုတင်ရာ၌ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တို့ မဲအများစုရ၍ နိုင်သော်လည်း ဘုရင်ခံ သဘောမတူလျှင် (ဗီတို) ဖြင့် ပယ်ချခံရတတ်သည်။
ထို့ကြောင့် ၁၉၂၂ ဇူလိုင် (၁၅) (၁၆) ဂျူဗလီဟောအစည်းအဝေးတွင် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမက “ဒိုင်အာခီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် သည် ဗျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူကို မတိုင်ပင်ဘဲ ဗျူရိုကရက်တို့က စီမံအုပ်ချုပ်သောစနစ်ဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြခဲ့သည်။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် (၇၉) ဦးသည် အာဏာပါဝါမရှိသော ရုပ်ပြလှည့်စားမှု မျှသာဖြစ်သည်။ ပြည် သူက သဘောတူ ၍ ဆောင်ရွက် လေဟန် ပရိယာယ်ဆောင်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒိုင်အာခီရွေး ပွဲမ၀င်သင့်။ ဒိုင်အာခီကောင်စီ၌ မပါသင့်။ ဒိုင်အာခီကောင်စီဝင်၍ ပူးသတ်ရေး လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်။ ဗျူရိုကရက်တို့၏ သြဇာ ကို မလွန်ဆန်နိုင်” စသည်ဖြင့် ဆရာတော်က ရှင်းပြခဲ့သည်။ မှတ်သားအားတက်ဖွယ် ဆရာတော်၏ မိန့်ခွန်းမှ ကောက် နှုတ်ချက်တခုမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။
“ဟုမ္မရူးအတွက် ကြိုးစားကြရာမှာ ကြောက်လန့်စိတ်တွေ မထားကြနဲ့၊ ကြောက်မွှေးပါရင် ဇာဂနာနဲ့ နုတ်ပစ်ကြရမယ်။ ခိုး ရမှာ ဒိုင်အာခီကောင်စီ ၀င်ရမှာသာ ကြောက်၊ ကျေးလက်က ဒကာတွေ သူကြီးကို မကြောက်ကြနဲ့၊ သူကြီးတင်မက မြို့ အုပ် ၀န်ထောက်လည်း ကြောက်ဖို့မလိုဘူး။ သူတို့ထက် ကြီးတဲ့ ဘုရင်ခံဆိုတာလည်း ကြောက်စရာမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်တိုင်း ပြည်ကို ကိုယ့်လူမျိုး အုပ်ချုပ်ရအောင် ဘုရင်ခံနဲ့ဗျူရိုကရက်တွေကို နှင်ထုတ်ကြရမယ်။ ကရက်ဒေါက် ထွက်သွားလို့ ဥတ္တမက ဂျူဗလီမှ ထပ်ပြီးအမိန့်ပေးနေတယ်။”
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနှင့် ဂျီစီဘီအေခေါင်းဆောင်များက ဟုမ္မရူးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးရန်၊ သဿမေဓ လူခွန် ဖျက်သိမ်း ပေးရန်၊ လယ်ယာမြေ အခွန်အကောက်များ လျှော့ချပေးရန်၊ အဓိကထား၍ ဟောပြောတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ် အစိုးရက ၁၉၃၀ ဆရာစံသူပုန် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းကိစ္စကို ပြန်လှန်သုံးသပ်ရာ၌ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ ဟောပြောချက်များကို အကြောင်းရင်း တချက်အဖြစ် ထည့်သွင်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
၁၉၅၆ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေအသင်းမှ ထုတ်ဝေသော “နှစ်ငါးဆယ် ကမ္ဘာ့ရေးရာ စာအုပ်” တွင် “ဆရာ တော်၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့သည် ‘အိပ်သောယောင်္ကျား နိုးသောလားသို့’ လွတ်လပ်ရေးလမ်းစကို မြင် ကြရ၏။ ဆရာတော်ကား ယခု မြန်မာနိုင်ငံတော်သူ မြန်မာနိုင်ငံတော်သားတို့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် အပိုင်ရှု ခံစားစံစားနေ ရသော လွတ်လပ်ရေး ဗိမာန်ကြီးကို အစဦးစွာ ပန္နက်ချခဲ့သော အာဇာနည်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေတည်း” ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ သမိုင်းနှင့် အာဇာနည်ဂုဏ်ပုဒ်တို့ကို စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက်က မပျက်ပျက် အောင် ဖျက်နေကြသော်လည်း ပယ်ဖျက်၍မရဘဲ ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ယနေ့ ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်လျှက်ရှိကြသော လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တို့အနေဖြင့် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ အာဇာနည် စိတ်ဓာတ်ကို စံနမူယူ၍ အာဏာရှင်စနစ် မှန်သမျှ အမြစ်မကျန်ဖျက်သိမ်းရေးကို ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြချိန် ရောက်ပေပြီ။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတို့ခေတ် လူငယ်များသည်ပင် ဆရာတော်၏ လွတ်လပ်ရေးနှိုးဆော်သံကိုနာခံ၍ နိုင် ငံရေးနိုးကြားခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ် သဖြင့် ယနေ့ခေတ်လူငယ်တို့ကလည်း အာဏာရှင်အဆက်ဆက်က အမှောင်ချထားခဲ့ သည့် ဆရာတော်၏ သမိုင်းနှင့် ဂုဏ်ကျေးဇူး တို့ကို ကို ပြန်လည်လေ့လာဖေါ်ထုတ်ကြရပေမည်။ ဆရာတော့် သြ၀ါဒတို့ ကို ခေတ်နှင့် ဆီလျော်အောင် လေ့လာ၍ ပြန်လည် ကျင့်သုံးကြရပေမည်။
ဆရာတော်သည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပင်ဖြစ်သော်လည် မြန်မာတမျိုးသားလုံးအရေးကို ထူးချွန်ထက်မြက်စွာ ဆောင်ရွက် ခဲ့သော ပုဂ္ဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်ရုံမက အာရှတခွင်ကပါ အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည့်အလျှောက် (အာရှနေ၀န်း) ဟုပင် ဂုဏ်တင်ခံခဲ့ ရသော ပုဂ္ဂ္ဂိုလ်လည်း ဖြစ်သည်။ လူထုသဘောဆန္ဒကို မယူဘဲ အုပ်ချုပ်သည့် အစိုးရမျိုးကို လက်မခံသင့်၊ လူထုကို ရုပ်ပြ လှည့်စားသည့် ဒိုင်အာခီ ရွေးကောက်ပွဲမျိုးကို လက်မခံသင့်ဟု ဆရာတော်ဝေဖန်ပြခဲ့ဘူးသည့် အချက်ကို ဆင်ခြင်မိတိုင်း ဆရာတော်၏ ခေတ်မီလှသော ဒီမိုကရေစီအမြင်ကို အံ့သြရပေသည်။
“မြန်မာတိုင်းသူပြည်သားတို့ဟာ ကျိုးနွံတယ်ဆိုတဲ့ အောက်တန်းကျစိတ်များကို ဖယ်ရှားပစ်ကြရမယ်။” ဆိုသည့် ဆရာ တော်၏ သြ၀ါဒမှာလည်း လွတ်လပ်ရေးနှင့်ထိုက်တန်သော နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြောင်း လူစွမ်းလူစ ထုတ်ပြခိုင်း သည့် အားပေး တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်း စွဲမှတ်ကျင့်သုံးကြဖို့လိုသည်။
“မြန်မာတိုင်းသူပြည်သားတို့ဟာ စွမ်းရည်သတ္တိရှိကြောင်း၊ ပညာရှိကြောင်းနဲ့ မဟုတ်မခံ စိတ်ဓာတ်ကို ပြရမယ်။ ဒီလိုပြ နိုင်ရင် ကျုပ်တို့ကို ဘယ်သူကမှ စော်ကားရဲ ဖိနှိပ်ရဲမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘယ်လိုအင်အားကြီးပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် တဲ့ အစိုးရဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားအပေါင်း စည်းလုံးညီညာစွာနဲ့ တွန်းလှန်နိုင်ကြရင် တာရှည်ခံနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး” ဟူ သော ဆရာတော်၏ မိန့်ထုံး သြ၀ါဒကို နှလုံးသွင်းလျက် ဆရာတော်ပျံလွန်တော်မူခြင်း နှစ် (၇၂) အထိမ်းအမှတ် နေ့ (စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၁) အား ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဂုဏ်ပြုလိုက်ရပေသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/06/2011 1 အကြံပြုခြင်း
၀ီကီလိခ်မှ မြန်မာ့ အကြောင်း
မြန်မာ နိုင်ငံ ရှိ အမေရိကန် သံရုံးမှ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန် မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်
ကြီးဌာန သို့ပေးပို့သို့လှို့ ဝှက်၊ ထိပ်တန်း လှို့ ဝှက် ၊ အထူး လှို့ ဝှက် ကြေးနန်း များ အနက်မှာ
ကြေးa နန်း အချို့ကို မြန်မာ ၀ီကီ လိခ် က နေ့ စဉ် ပြန်လည် ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ် ပါသည်။
|ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး၊ ကဗျာ ဆရာ အောင်ဝေး ရဲ့နိုင်ငံ ရေး ခိုလှုံ ခွင့် ဒေါက်တာ လွဏ်းဆွေ နဲ့မဲဆောက် မှ ပြန်ဆုံစည်း ရပုံ ၊ အုတ်ကြား မြက် ဂမ်ဘာရီ
တေဇ ၊ ထွန်းမြင့် နိုင် ၊ ဦးလုလု ၊ Sun Flower Travel and Tours ဦးကျော်ထွန်း တို့ နဲ့ရင်းနှီးသူကအမေရိကန် သံရုံး ကို သတင်း တွေ ပို့ 
ဟွန်ဒီ ခေါ် ဘဏ် မဟုတ် သည့် ငွေလွှဲ စနစ် မြန်မာ မှာ ထွန်းကား
နိုင်ငံ တကာ က ဆု များ ရလျှင် ဆု နှင့် ပိုက် ဆံ ကို အမေရိကန် သံရုံး မှာ လာ ထုတ် နိုင်
နာမည်ဝှက် ဟူစိန် က သတင်း ပို့ တဲ့ တေဇ ရဲ့တိုးချဲ့စီးပွား ရေး လုပ်ငန်းများ
နအဖ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ၈၈ မျိုးဆက် နဲ့ကိုဇာဂနာ တို့ ထောက် ခံ ဖို့နေ၀င်းမောင် က ကြား ပွဲ စား လုပ်ခဲ့
Rice for Guns
နေရွှေသွေးအောင် နဲ့7 Lekker ကော်ဖီဆိုင်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေး ကိုယ်ရေး အရာ ရှိ ဗိုလ်မှုးကြီး ဘိုဝင်းထွန်း ရဲ့ ဆန်းကြယ်စွာ သေဆုံးမှု
တရားမ၀င် ဘဏ်ငွေလွှဲ စနစ် (ဟွန်ဒီ) နဲ့နိုင်ငံ တကာ အကြမ်းဖက် ကွန်ယက်
| အညှိုးကြီး ပြီး ရန်လို သော မုန်းတီးမှု ဖြင့် ထောက်လှမ်းရေး အကြီး အကဲ ၏ ကွန်ယက် ၀င်များ ကို ပြစ်ဒဏ်များ ချ |
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း | အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၀၄ မိနစ်
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၇ရက်နေ့က ပြောခဲ့တဲ့ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ ဦး/ဗိုလ်ချုပ် သိန်းစိန်ရဲ့ မိန့်ခွန်းကို မှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ “သဘောထားအမြင်ချင်း မတူကြတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေ မတူကွဲပြားတာတွေကို ဘေးဖယ်၊ တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်အကျိုးရှိစေမယ့် ဘုံအကျိုးစီးပွားတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အမြဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့စကားလို ရွှန်းရွှန်းဝေနေတဲ့ အပြောတွေလည်း အများအပြားပါရှိတဲ့ မိန့်ခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကြံ့ဖွံ့အစိုးရက ပြည်ပရောက်နေသူတွေအပေါ် သဘောထားကြီးကြောင်း ပြတဲ့အနေနဲ့ “ပြည်ပကို အကြောင်း အမျိုးမျိုးနှင့် ထွက်ခွာသွားသူများ ပြန်လာနိုင်ကြောင်း” လို့တောင် မိန့်ခွန်းမှာ ပါခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးစတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို တမင်ရှောင်ကွင်းပြီး
ပြောထားတဲ့ သမ္မတသစ် ရဲ့ မိန့်ခွန်းရှည်ကြီးမှာ ထုတ်မပြောသော်လည်း ထင်ရှားစွာမြင်နေရတဲ့ အချက်သုံးချက် ပါရှိပါတယ်။
(၁) အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရေးနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက သူတို့အပေါ် ကျပ်ထားတဲ့မူလီတွေကို
(၂) ပြည်ပရောက်တွေထဲမှာ သပ်လျှိုသွေးခွဲရေး။
(၃) သူတို့ကို ဆန့်ကျင်နေသူတွေကို အသက်သာဆုံးနည်းနဲ့ ဖမ်းဆီးနိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ
နံပါတ်တစ်ကိုတော့ အထူးပြောနေစရာမလိုပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေးနားလည်သူ အားလုံးက ဒီစစ်ဗိုလ်တွေ ပါးစပ်ဟလိုက်တာနဲ့ အူဘယ်နှစ်ခွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်နှစ် အချက်ကတော့ သတိထားသင့်တဲ့ ကိစ္စ
Vote No - No Vote ကွဲခဲ့တာ၊ ၂ဝ၁ဝ
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရေး၊ မဝင်ရေး ကွဲခဲ့တာတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် နအဖ လုပ်ခဲ့တာတွေဟာ တစုံတရာ ထိရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါမယ်
ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေ အကြားမှာ ၂ဝဝ၈
ဖွဲ့စည်း ပုံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ Vote No - No Vote ကွဲခဲ့တာ၊ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး၊
မဝင်ရေး ကွဲခဲ့တာတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် နအဖ လုပ်ခဲ့တာတွေဟာ တစုံတရာ ထိရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ
တွေ့ရပါမယ်။ အနည်းဆုံး ရှုပ်ထွေးမှုကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုအခါမှာလည်း သမ္မတရဲ့ မိန့်ခွန်း ထွက်လာတာနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက နိုင်ငံရေး လောကမှာ မတူတဲ့ ပြောကြား နည်းတွေ ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကနေ စတွက်လိုက်ရင် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် နိုင်ငံရေး လုပ်လာသူတွေ အနေနဲ့
အခု ဒီမြှူဆွယ်ချက်လေးကျမှ မျက်စိလည်တာ၊ နားယောင်တာဆိုရင်တော့ ညံ့လွန်းရာကျပါတယ်။ ဗိုလ်သိန်းစိန်ရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ “ပြစ်မှုတစုံတရာ ကျူးလွန်သွားတာမရှိရင် အချိန်မရွေး ပြန်လာနိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ စဉ်းစားပေးမှာ
ဖြစ်ပါတယ်”လို့ဆိုပါတယ်။ အပြစ်ကျူးလွန်တာ မရှိခဲ့မှပါတဲ့။ အပြစ်ဆိုတာဘာလဲ ပြောမထားပါဘူး။
နောက်ပြီး စဉ်းစားပေးမှာပါတဲ့။ ပြည်ပကနေလက်နက်
ပြည်ပကနေ လက်နက်ချကြောင်း နှုတ်နဲ့၊ စာနဲ့ ဖော်ပြရမှာလား။ တကယ်ကတော့
ကိုယ့်ယောင်ကို ဆွဲပြီး နန်းထဲဝင်တာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ရဲစခန်း ပို့တာပဲ ဖြစ်မှာပါ
ချကြောင်း နှုတ်နဲ့၊ စာနဲ့ဖော်ပြရမှာလား။ တကယ်ကတော့ ကိုယ့်ယောင်ကိုဆွဲပြီး နန်းထဲဝင်တာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ရဲစခန်းပို့တာပဲဖြစ်မှာပါ။ မမေ့သင့်တာက ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့ရဲ့ “ဒီတံခါးဖွင့်”ပေးမှုဟာ သဗ္ဗေသတ္တာဝေနေ ယျာအားလုံးကို ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ကမ်းလှမ်းတဲ့အတွက် ဘယ်လိုလူကလာပြီး ဘယ်လိုလူက မလာဘူးဆိုတာ သူတို့လည်း သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ အရ သိပါတယ်။ တချို့သော ပြည်ပမှာမြှပ်ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့လူတွေ အိမ်ပြန်ကောင်းအောင် လုပ်တာလားလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်။
အခုအထိတော့ “စာတမ်းဖတ်သူ”တွေက လမ်းဖောက်လိုက်ပါပြီ။ တချိန်တည်းမှာ ဘယ်သူတွေတော့ ပြန်လာလို့ ဗမာပြည်ပြန်ရောက်နေပြီစတဲ့ ကောလာဟာလတွေကိုလည်း လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သမ္မတ ဆိုသူက
ပြောပြီးလို့မှ ဘာမှမကြာဘူး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဆိုသူက “မည်သည့် တရားမဝင် သွားရောက်မှုမျိုးကို မဆို တရား ဥပဒေအရ အရေးယူ အပြစ်ပေးနိုင်ပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများကလည်း အာဆီယံ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ နိုင်ငံတကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဥပဒေဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ပြီး နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သို့ ရောက်ရှိနေသူများကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း”ပြောလာပါတယ်။ ငါးစာပါမက ငါးမျှားချိတ်ကိုပါ မြင်ရတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကားတကားလို ဆိုရင် ဒီဟာတွေက ဇာတ်လမ်းရဲ့
ဒီကိစ္စမှာ ကြုံလိုက်ရတဲ့ ထောက်ခံမဲ ၈မဲ။ ကြားနေမဲ ၄၁မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၃၃၆မဲ ဆိုတာဟာ နောင်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆုံးဖြတ်တိုင်း၊ စစ်အုပ်စုက မလိုက်လျော ချင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်တိုင်း တွေ့ ရမယ့် မဲ အရေအတွက် ဆိုရင် မမှားဘူး ထင်ပါတယ်
အစပိုင်းမှာ တွေ့ရတာတွေပါ။ အခုတော့ ဇာတ်လယ်ပိုင်းလို့ ဆိုရမယ့်ကိစ္စတွေကို ကြပ်ပြေးလွှတ်တော်ကြီးမှာ စတွေ့လာ
ရပါပြီ။ ဒီအထဲကတခုကတော့ တနေ့ကမှ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့
ပုဒ်မ (၅)ဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေး ကိစ္စပါ။ အဆိုတင်တဲ့လူက ဒီ “လွှတ်တော်ကြီး” ထဲကနေ ဒီမိုကရေစီတွေ ပေါက်ဖွား လာမယ်လို့ ဖော်ထုတ်ပြသရင်း ဦး/ဗိုလ်ချုပ် သိန်းစိန်တို့ အပေါ်ထားရှိတဲ့ သူ့စေတနာကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့တာ
သူကမြန်မာပြည်မှာ ဒီပုဒ်မ (၅)ကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဟာ တရားမှန်ကန်တယ်လို့ ပြောသွားတာကို သတိထား မိလိုက်ကြမှာပါ။ ဖဆပလ ခေတ်ကစလို့ ဗိုလ်သန်းရွှေ လက်ထက်အထိ ခေတ်အဆက်ဆက် ပုဒ်မ(၅)နဲ့ ဖမ်းခဲ့တာတွေဟာ တရားတယ်၊ ဖမ်းသင့်တယ်လို့ ပြောတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့စေတနာကို သူ့သမ္မတကြီးက လက်တွေ့တုန့်ပြန်လိုက်ပုံက လျှို့ဝှက်မဲပေးခွင့် မပြုတာနဲ့ အစချီပါတယ်။
နောက်ပြီး စစ်အုပ်စုရဲ့ အမာခံအင်အားစုအဖြစ် စစ်ဗိုလ် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ကြံ့ဖွံ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက “အရေးကြီးရင်းဖြင့် သူတို့သွေးနည်းသူတွေဟာ” တသားတည်းဖြစ်ကြောင်း မားမားရပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ မတ်တပ်ရပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ နောက်တွန့်သွားကြတဲ့၊ ထမရပ်ရဲကြတဲ့ လူထုကိုယ်စားတော်ကြီးများလည်း ရှိတယ် လို့ ပြောသံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာကြုံလိုက်ရတဲ့ ထောက်ခံမဲ ၈မဲ။ ကြားနေမဲ ၄၁မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၃၃၆မဲ ဆိုတာဟာ နောင်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆုံးဖြတ်တိုင်း၊ စစ်အုပ်စုက မလိုက်လျောချင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်တိုင်းတွေ့ရမယ့် မဲအရေအတွက်ဆိုရင် မမှားဘူးထင်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် သြဂုတ်လ ထပ်တွေ့ရတာကတော့ “ပြည်ထောင်စု
ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ဒီလွှတ်တော်
ကြောင့်မို့ နိုင်ငံ့ဓနတွေဟာ အခုဗိုလ်ချုပ်
မျိုးစုံနဲ့ လက်ဝေခံမျိုးစုံ လက်ဝါးကြီး အုပ်ထား တဲ့ အောက်ကနေ ပြည်သူတွေရဲ့ လက်ကို ရောက်လာမှာတဲ့လား။ နိုင်ငံရဲ့
အရေးကြီး ကိစ္စတွေကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေ သဘောထားနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ ရမှာတဲ့လား
အစိုးရနှင့်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များ၏ ရက် ၁ဝဝ ကာလ အတွင်း
ဆောင်ရွက်ချက်များကို ချီးကျူးကြောင်း မှတ်တမ်းတင်”တယ် ဆိုတဲ့ အဆိုကိစ္စပဲ။ အဲဒီအဆိုမှာလည်း အထက်ကလိုပဲ
အများစုနဲ့ အနိုင်ကျင့် အတည်ပြုလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တကယ်ကျတော့ ဒါတွေဟာအောက်ရုံးမှာ ဖြစ်နေတာပါ။ အထက်ရုံးနဲ့ သမ္မတရုံးတွေ ကျန်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင်
၁၉၅ဝ အရေးပ်ါစီမံမှု အက်ဥပဒေဆိုတာမျိုးနဲ့ အချိန်မရွေး အာဏာသိမ်းခွင့် ပေးထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုတာကြီးလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒီတော့ ဘာမှမရှိတာနဲ့ စာရင် ဒါမျိုးတွေရှိတာက တော်သေးတယ် လို့ ပြောလေ့ရှိသူတွေကို မေးဖို့ကောင်းတာက
- ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ဒီလွှတ်တော်ကြောင့်မို့ နိုင်ငံ့ဓနတွေဟာ အခုဗိုလ်ချုပ်မျိုးစုံနဲ့ လက်ဝေခံမျိုးစုံ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ အောက်ကနေ ပြည်သူတွေရဲ့လက်ကို ရောက်လာမှာတဲ့လား။
- နိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးကိစ္စတွေကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေ သဘောထားနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့
အထက်မှာပြောခဲ့တာကို ပြန်ကောက်ရရင် ဇာတ်လမ်းကအခုမှ အလယ်ပိုင်းတောင် ကောင်းကောင်း မရောက်
သေးပါဘူး။ ရက် ၁ဝဝကျော်ရုံလေးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တင်းပုတ်နဲ့ထုတာ ခံနေရပါပြီ။
ပဒိုမန်း​ငြိမ်း​မောင်ကို မြန်မာအာဏာပိုင် စစ်​ကြော​...
အမျိုးသမီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မျှော်လင့်ချက်ကို ပ...